Fanaovana teny ierana sy mangarahara Sotoavina mitady ho very ihany koa
Vao nanomboka ny ahamehana ara-pahasalamana dia efa nilaza ny filoham-pirenena fa hijoro ho raiamandreny sy hamoaka hatrany ny mangarahara.
Soatoavina hita ho mitady ho very ihany koa ankehitriny ity fanaovana teny ierana sy mangarahara ity. Tsiahivina fa raha ny tantara sy ny lovantsofina dia tsy nilaina teo amin’ny Malagasy izany ny fifanarahana an-taratasy sy sonia. Vitan’ny Malagasy ny nitandrina toy ny anak’andriamaso izany atao hoe teny ierana izany. Tena fady ny hoe manapa-kevitra eo amin’ny toeran’olona. Mety voahaja amin’ny ampahany ihany izay ankehitriny. Heno isan’andro tsinona hoe ireto ireo fikambanana na vondrona na manam-pahefana nanolotra fanampiana ao anatin’izao ahamehana ara-pahasalamana izao saingy mbola mampametra-panontaniana tanteraka mandra-kankehitriny kosa anefa ny mikasika ilay mangarahara ao anatin’izany rehetra izany. Tsotra hatrany anefa ny fanontaniana mipetraka saingy mahagaga fa miolana sy tsy mahafa-po hatreto ny valinteny ho setriny. Isan’izay fanontaniana izay, ohatra, ny hoe mankaiza avy ireo fanampiana? Ahoana no hitsinjarana azy? Inona avy no mbola tsy voazara? Faritra aiza no mbola tsy nahazo? Inona avy no tokony ho anatin’ilay fanampiana? Izany santionany rehetra izany dia samy andrasana avokoa ho atao Tam tam amin’ny haino aman-jery isan’andro fa tsy sanatria mbola fisehosehoana anaty fahasahiranan’ny valalabemandry hatrany.